Wararka Maanta: Khamiis, July 15, 2021-Dr Adna Aadan oo markale ka hadashay dhakhaatiir Muqdisho laga mastafuriyay
Dr Adna oo ah ergayga Somaliland u qaabilsan wada-hadalada Somaliland iyo dowlada Soomaaliya, ayaa sheegtay in shaqaalaheeda sigaar loo badhtilmameedsaday.
"Dadkii hakadka ku aha madaarka Muqdisho, baasbooradoodi ayaa la eegay, labadii ku safrayay baasboorka Somaliland ayaa lala soo dagay" ayay tidhi.
Adna ayaa sheegtay in qofka hakadka ku ah madaarka aan xaqloogu lahayn in la waydiiyo baasboor.
"Qofka madaar hakad ku ah xaq looguma laha in la waydiiyo baasboor, la xidho ama la qafaasho" ayay tidhi.
Dr Adna ayaa sheegtay in dhakhaatiirta diyaarada looga dajiyay madama oo ay siteen baasboor waddan aan la aqoonsanayn.
"Labada qof 3 maalmood ayay xidhnayeen oo ciqaabtooduna ahayd baasboor dal aan la aqoonsanayn ayaad sidataan" ayay tidhi.
"Imisa dal baynu u dhoofna oo dalal kale sii dhexmarnaa oo laynagu ixtiraama" ayay hadalkeeda sii raacisay.
Adna ayaa sheegtay in baasboorka Somaliland lagu tago dalal aan baasboorka Soomaaliya lagu tagin.
"Dalal diiday in ay baasboorka Soomaliya fiise ku bixiyaan ayaa ka Somaliland kusiiya" ayay tidhi.
Dhakhtiirtan oo ka hawl gala isbitaalka Adna Aadan ee Hargaysa oo tababar ugu socday dalka Kenya, ayaa baasbooradoodi laga qaaday kadibna Hargaysa looso mastafuriyay.